Ltd. – Studio – MMANIME
Aoi Bungaku Series No Longer Human (Ningen Shikkaku)- အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်​ဖြစ်တဲ့ Oba Yozo ဟာ အထီးကျန်မှုကိုခံစားနေရပြီးရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ဆုံးလို့နေခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးပြီး ရည်ရွယ်ချက်မဲ့နေတဲ့Oba Yozo ဟာ နှစ်အတော်ကြာအောင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာ,စိတ်ဓာတ်ကျတာ,မူးယစ်ဆေးသုံးတာ စတဲ့မကောင်းမှုသံသရာဝဲထဲမှာနစ်မွန်းနေခဲ့ပါတယ် Chapter (4) ခုရှိပြီး တစ်ခုစီတိုင်းမှာ သူ့ဘဝရဲ့မတူညီတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုဖော်ပြထားပြီး နောက်ဆုံး Chapter မှာတော့အရင်ကအတိုင်း အနှစ်သာရမရှိဗလာနတ္ထိဖြစ်နေတဲ့လူပျက်ဘဝပြန်ရောက်သွားပုံကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ် _______________________________________________ In the Forest,Under Cheeries in Full Bloom- 12 ရာစုကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့ တောပုန်းဓားပြတို့ကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် _______________________________________________ Run,Melos! ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ နတ်ဆိုးနဲ့ပန်းပုစရာ Phidias တို့ရဲ့ဂရိဂန္တဝင်ဇာတ်လမ်းကိုမှပြန်ပြီးပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ "Run, Melos!" ရဲ့အဓိကဖော်ကျူးပြထားတာက ခိုင်မြဲတဲ့ Friendship ပဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ရပေမယ့်လည်း Malos ဟာသူ့သူငယ်ချင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရပုံကိုရိုက်ကူးဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် _______________________________________________ The Spider's Thread- ဗုဒ္ဓ Shakyamuni ဟာ အကြင်နာမရှိတဲ့ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ငရဲကျနေတာကို အမှတ်မထင်သတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟါ နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရာဇဝတ်သားဟာ သူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးအကြင်နာရှိတဲ့လုပ်ရပ်ဆိုလို့ တောထဲကပင့်ကူလေးတစ်ကောင်ကိုတက်မနင်းဘဲရှောင်သွားဖူးတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒိလိုကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်လေးကိုထောက်ထားပြီး ဗုဒ္ဓဟါ ပင့်ကူလေးရဲ့ငွေရောင်ပိုးမျင်တစ်ခုကိုနိဗ္ဗာန်ဘုံကနေ ငရဲဆီချပေးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်းအဲ့ဒိအခွင့်အရေးကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်ပြီးငရဲကနေထွက်လာနိုင်/မထွက်လာနိုင်ဆိုတာကတော့ ရာဇဝတ်သားအပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ် _______________________________________________ Hell Screen- နာမည်ကြီးပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Yoshihide ဟာဘုရင်​Horikawa ဆီကနေ ...